ဘဝမှတ်တိုင်: ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်က Flash မီးလေးက တဖျတ်ဖျတ်နဲ့အသိလေးပေးမယ်-Light Manager 9.5 APK
ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်က Flash မီးလေးက တဖျတ်ဖျတ်နဲ့အသိလေးပေးမယ်-Light Manager 9.5 APK
Android ဖုန်းပိုင်ရှင်အတွက် ဖုန်းထဲကို message ဝင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြား Application တစ်ခုခု (Facebook, line and Viber) က Notification ဝင်လာတဲ့အခါ ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်က Flash မီးလေးက တပျက်ပျက်နဲ့ အသံပေးသွားစေမယ့် Android Application လေးဖြစ်ပါတယ်။ Facebook, Message စတဲ့ Notification တွေဝင်လာရင်အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ ဖုန်းထဲကို Message တစ်ခုခုဝင်လာရင်၊ Facebook က Notification တစ်ခုခုတက်လာရင် ဖုန်းကို Silent လုပ်ထားရင်တောင်မှ မီးတပျတ်ပျတ်အလင်းရောင်လေးနဲ့ သတိပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မသိလိုက်မှာ မပူရတော့ပါဘူး။ ဖုန်းထဲမှာ သွင်းထားသင့်တဲ့ Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဖုန်းသုံးသူအတွက် update လေးဖြစ်လာလို့ ဒေါင်းလုပ်ယူထားစေချင်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကတော့ ဖိုင်းဆိုဒ် 2.87MB ဖြစ်ပြီး Android OS 2.2 အထက်ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/03/2016 05:36:00 am
ဒီနေ့ထွက် - Facebook Messenger v73.0.0.12.70 APKေ...
Play Store မှာဒေါင်းလို့မရတဲ့ CoC အပါအ၀င် ဂိမ်းတွေ...
360 root PC (4.0x to 6.0x)
Facebook ပေါ်မှာ Video များစွာကို လွယ်လွယ်ကူကူ 100%...
Street Fighter4HD [109 MB] [apk]
3D chess game [5.9 MB] [apk]
G730-U00 တွေ ချာဂျင်အဝင်မပြတဲ့အခါ အသုံးတဲ့ မယ်ထင်ပ...
ဖုန်းထဲ မလိုအပ်တော့တဲ့ ဆော့ဝဲတွေနဲ့ Virus ရန်မှလည်...
ဒိုးဆက် ဂိမ်း [29.4 MB] [apk]
ဖုန်း၏ Battery သက်တမ်းကြာရှည်ခံစေပြီး performance...
ဆင်မိုက် Game [47.6 MB] [apk]
စဖိုမှူးGame [48 MB] [apk]
♪ Ringtones , Wallpaper , Icon Packs သန်းပေါင်းမျာ...
Mobile Data သုံးစွဲနှုန်းကို ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် သက...
Basic [[ ဖုန်းပြင်ဖို့အတွက်အခြေခံ ]]
HUAWEI G730 Standby shock error
Huawei c8813 ရဲ့ Rx cell Tx cell
Galaxy Ace2GT-i8160 Baseband Unknown IMEI Unknow...
Honor 3C china and international brand များအတွက် s...
Huawei C8813 backlight
huawei p1 battery
Huawei M886 Sim Error
Coolpad 5109 Backlight
HUAWEI Y600D-C00 sim way
Huawei Backlight 2
Huawei & CoolPad LCD
Huawei T8833 Vibrate တုန်
MoMo tab ရဲ့ ပုံ နဲ့y210 battery ငုတ်ပတ်လမ်းပြတ်...
HUAWEI G730 တွေအားသွင်းရင်းရှော့ဖြစ်ပြီးပါဝါသေသွား...
Huawei Blue Screen Error
HUAWEI C8816 ပါ။ပါဝါလာတစ်ချက်မလာတစ်ချက်
HUAWEI G730 တွေ TOUCH ဆွဲလို့ မ၇တဲ့ error
Huawei C8813 all IC
အခြေခံ မိုဘိုင်းဖုန်း ဖြေရှင်းနည်း အကျဉ်းချုပ်မျာ...
ခဏခဏ မေ့တတ်သူများ အတွက် အသံလေးတွေကို ထည့်သွင်းပြီး...
ပုံတွေရဲ့ မျက်နှာလေးမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုး အစားထိုး ...
Samsung Galaxy Trend (GT-S7560) (THL) Stock Rom Fr...
LAVA Lolipop Myanmar Font Installar (Credit Nyi Pa...
♪ ဆရာတော်ကြီး( ၇ )ပါးရဲ့ တရားစု စကားစု သြဝါဒများကိ...
Huawei ဖုန်း​တွေ vol ခလုပ်​​တွေ ပျက်​​ပီး dload f...
ဟယ်လီကော်ပတာ စစ်ပွဲ [123.8 MB] [zip] + SD Data
Samsung J1 အတွက်Way ပုံလေးတွေပါ
Gplay mini backlight
G730-U00 တွေမှာ touch မရတဲ့ပြစ်ချက်လေးအတွက်ပါ။
Oppo R831 နဲ့ Oppo R831K Touchမှန် ၂ခုတွေ့ကြလေသောအ...
Honor 4x နှင့် Che-l02 Sleep mode Error